प्रहरी भुँडी घटाउने अभियानमा! - Everest Dainik - News from Nepal
प्रहरी भुँडी घटाउने अभियानमा!
स्याङ्जा, फागुन २२ । मोटो हुनु र भुँडी बढ्नुले कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै जिल्ला प्रहरीले मातहत प्रहरीको शारीरिक बनोट सुधारमा ध्यान दिएको छ । प्रहरी जवान सुनिल राई जिल्ला प्रहरीको सञ्चार शाखामा कार्यरत छन् ।
कम्प्युटर अपरेटरको भूमिकामा रहेका उनलाई बाहिरी ड्युटी खासै पर्दैन। समय, घटना र परिस्थितिबाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा कार्यालयमै सञ्चारको जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। कार्यालय बाहिर वा मुद्दा फाँट जस्तो बढी व्यस्त हुने शाखामा काम गर्न नपर्ने जोकोही पनि अलि फुर्सदिला हुन्छन्। यही कारण जिम्मेवारी र अल्छीपन बढ्दै गएको अनुभव उनमा छ।
केही महिनाअघि प्रमुख भएर आएका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार लम्सालले अधिकांश प्रहरीमा मोटोपना बढी र भुँडी लागेका मात्र देखेपछि हरेक दिन बिहान दौडने गरेको बताए। दैनिक हुने हूलहुज्जत, आन्दोलन र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा खटिनु प्रहरीको ड्युटी हो। राईले दौडन सुरु गरेदेखि तनावमुक्त हुने र आफ्नो अल्छीपन हट्दै गएको अनुभव सुनाए।
प्रत्येक दिन बिहान डेढदुई घण्टा दौडन थालेपछि उनले उच्च रक्तचापमा समेत कमी आएको बताए। उनीसँगै भुँडी घटाउने अभियानमा प्रहरी हवलदार अमृत खड्का पनि छन्। नियमित व्यायाम र दौडबाट प्रहरी कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षतामा वृद्धि भई काम कारबाही चुस्त भएको अनुभव उनमा पनि छ। उनले यति बेला प्रहरी साथीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न चाहेको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट
याे पनि पढ्नुस प्रहरी निरीक्षकले ड्यटीमै गरे आत्महत्या